सन् २०२२ मा लन्च हुदै यो शक्तिशाली इलेक्ट्रिक कार, ३९४ किलोमिटरको रेन्ज दिनेछ, के छ यसको बिषेश ? – American Nepali News
January 7, 2022 adminLeaveaComment on सन् २०२२ मा लन्च हुदै यो शक्तिशाली इलेक्ट्रिक कार, ३९४ किलोमिटरको रेन्ज दिनेछ, के छ यसको बिषेश ?
सोसाइटी अफ म्यानुफ्याक्चरर्स अफ इलेक्ट्रिक भेहिकल का अनुसार सन् २०२२ विद्युतीय सवारी साधनको वर्ष हुने हो भने २०२२ मा विगत १५ वर्षमा बिक्री भएका १० लाख विद्युतीय सवारीको बराबरीमा विद्युतीय सवारी साधन बिक्री हुनेछ । यसैलाई ध्यानमा राख्दै अधिकांश अटोमोबाइल कम्पनीले आफ्नो विद्युतीय कार ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् । फेमि -२ सब्सिडी अन्तर्गत, केन्द्र र राज्य सरकारहरूले विद्युतीय सवारीमा सब्सिडी दिइरहेका छन्। जसका कारण विद्युतीय सवारीसाधनको बजारमा उछाल आएको छ । सन् २०२२ मा लन्च हुने विद्युतीय कारका बारेमा जानकारी दिदैछौ ।
टाटा नेक्सोन ईभी को सफलतापछि टाटा मोटर्सले विद्युतीय सवारी साधनको क्षेत्रमा पछाडि पर्न चाहँदैन । यसलाई ध्यानमा राख्दै टाटा मोटर्सले सन् २०२२ मा तीनवटा नयाँ इलेक्ट्रिक कार ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । जसमध्ये पहिलो अल्ट्रोज ​​ईभी अल्ट्रोज ईभी हुनेछ जुन कम्पनीले अल्फा प्लेटफर्ममा विकास गरिरहेको छ र यो पहिलो पटक २०१९ अटो एक्सपोमा ल्याइएको थियो। यो कारले एक पटक चार्जमा २५० देखि ३०० किलोमिटरको रेन्ज दिन सक्छ ।
टिंगो ईभी टाटा मोटर्सको दोस्रो कार हुनेछ कम्पनीले यसलाई १० लाख रुपैयाँमा लन्च गर्नेछ। जसको डिजाइन पहिले देखि नै रहेको टियागो पेट्रोल-डिजेल भेरियन्ट जस्तै हुनेछ। योसँगै टाटा सिएरा कम्पनी टाटा मोटर्सको तेस्रो कार हुनेछ, यसको इलेक्ट्रिक संस्करण पनि २०२२ मा लन्च गर्न सकिनेछ ।
रेनोल्ड्सले पनि टाटा मोटर्सको पङ्क्तिमा दुईवटा इलेक्ट्रिक कार ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । जसमा कम्पनीले पहिलो कारमा ५२ किलोवाटको ब्याट्री प्याक दिनेछ, जसले ३९४ किलोमिटरको रेन्ज दिन सक्छ । अर्कोतर्फ, दोस्रो कार रेनो के जेडई हुनेछ जुन २०२० अटो एक्सपोमा प्रस्तुत गरिएको थियो। यो ह्याचब्याक कारले २६ किलोमिटरको ब्याट्री प्याक पाउनेछ जसले २६० किलोमिटरको रेन्ज दिन सक्छ।
ओमिक्रोन सङ्क्रमण कति दिनसम्म अरूलाई सर्न सक्छ? « Etajakhabar